PGCA : Hitondra rivo-baovao eo anivon’ny fitsarana
Omaly no napetraka amin’ ny fomba ofisialy tamin’ny toerany ny tonia mpampanoa lalàna jeneraly eo anivon’ ny fitsarana fampiakarana PGCA Charles Andriamiseza, tetsy amin’ ny fitsarana Anosy no nanatanterahina ny lanonana manetriketrika izany omaly maraina, …Tohiny
Mitohy ihany ny tsy fanarahan-dalàna ataon’i Marc Ravalomanana. Araka ny efa fantatra mantsy, dia mbola tsy tokony afaka mihodina ny orinasa Tiko na ny orinasa AAA, amin’izao fotoana izao. Marihina fa misy mpitory mantsy ity …Tohiny
Raharaha fanondranana volamena : Mpiasan’ny Air Madagascar maromaro mbola ho alaina am-bavany
Mbola tsy vita, ary mbola mitohy ny fanadihadiana mahakasika ny raharaha fanondranana volamena an-tsokosoko izay maha-voarohirohy sy hikarohana fatratra an’i Baritsialonina Andrifanantenana Alisoa, izay “steward” teo anivon’ny orinasam-pitaterana an’habakabaka Air Madagascar. Efa betsaka ireo mpiara-miasa …Tohiny
Harena an-kibon’ny tany : Misokatra ho an’ny Malagasy ny lalam-barotra any Inde
Nampahafantarina tamin’ny alalan’ny valandresaka natao ho an’ny mpanao gazety natao teto Antsirabe ny alakamisy 1 janoary 2018 teo fa nahazo lalam-barotra any Jaipur-Inde ny mpandraharaha misehatra eo amin’ny lalam-pihariana harena an-kibon’ny tany. Ny CNM na …Tohiny
Nipoaka ny takotra. Ela ny ela ka tonga amin’ny tsotsori-mamba hisarahana ny ben’ny tanànan’i Mahajanga am-perin’asa, Mokthar Salim Andriantomanga, avy amin’ny antoko Mapar, sy ireo mpanolo-tsaina monisipaly. Raha ny vaovao mantsy, nitroatra ireo mpanolo-tsaina monisipaly ...Tohiny